Apple | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Esi esi esi nri apple cider n'ulo
A na-eji anyị emepụta apụl site na jam, na-eme ka poteto ndị na-esi ísì ụtọ, na-eme ka ndị na-eme achịcha ma ọ bụ na-atụnye ha dị ka ihe jupụtara na achịcha, ma nke a enweghị ike iji mkpụrụ osisi ahụ mee ihe, ya mere i nwere ike ịnwa ịmepụta cider na ahụ ike. Kedu ụdị ihe ọṅụṅụ na otu esi eme ya n'ụlọ - gụọ ya.
Ụzọ kachasị mma nke apụl apụl maka oyi
Akpa ntu oyi maka oyi bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi mee ka nri oyi gị dịkwuo uru ma baa ọgaranya na vitamin. N'ihi ntakịrị ego na ala ha nke owuwe ihe ubi, a na-eji mkpụrụ osisi ndị a eme ihe na nri. Ezigbo ụlọ nwanyị maara ọtụtụ efere sitere na apụl oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, nke ga-erite uru n'ahụ oyi site na oyi oyi.
Njirimara bara uru ma na-egbochi mkpụrụ osisi apụl: owuwe ihe ubi na nchekwa
Ntucha bụ ụzọ kachasị mfe maka mkpụrụ osisi apụl maka oyi. N'ihi na o nwere ihe bara ụba, mkpụrụ osisi apụl nwere ọtụtụ ọgwụgwọ. A na-ejikarị mmiri na-emepụta Apple na nri: na mgbakwunye na compote a maara nke ọma, a na-ejikwa ha mee pies, pancakes, salads, jelii, agbakwunye ọka na tii, ma rie anụ.
Na-edozi apụl apụl maka oyi
Nye ọtụtụ n'ime anyị, apụl ndị nwere ike maka oyi, dị ka compotes, mmiri na ihe ndị ọzọ, na-ezukọta na ezumike na enweghị ncheta na nwata. Na billets, ebe, ma e wezụga apụl, e nwere mkpụrụ osisi ndị ọzọ na tomato, na-ewetara anyị na mgbede oyi oyi na-echeta nke osisi ubi na-esi ísì ụtọ. Na mgbakwunye, iwe mkpụrụ apụl dị mma maka ahụike, ebe ọ bụ na oyi, anyị anaghị enweta vitamin.
Apple na-etinye maka oyi dịka ntụziaka a kwadoro ga-abụ ihe bara uru na-agbakwunye nri nri kwa ụbọchị. Site na imezu teknụzụ nke nkwadebe, ngwaahịa ndị a ga - abụ naanị ndị nwere mmasị apple na ụtọ ha dị ụtọ, mana ha ga - aghọkwa ezigbo vitamin maka ahụ. Ị ma? Na foto niile dị na Russia oge ochie, a kụrụ ubi nke Iden na osisi apụl.